ကိုယျ့နိုငျငံကို တငျသှငျးလာ ကတညျးက ကားတှမှော ပါလာတဲ့ ဂပြနျစာတှေ ကိုမခှာပဲ ဂုဏျယူစှာကပျထားသူတှေ သတိထားစရာ – Nyi Ma Lay
ဂပြနျေ တှ ကြိုကျထီးရိုး လိုကျပို့ တော့ ကားလေးေ တှ အပျေါတကျလို့မရဘူး လမျးအွေ ခအနနေဲ့safety ကွောငျ့ ကားကွီးေ တှနဲ့ တောငျပျေါတကျရ တာပေါ့။ အဲ့ဒါနဲ့ ကားလကျမှ တျဖွတျပွီး ဂပြနျစာတနျွး ကီးနဲ့ကားပျေါတကျမယျေ ပါ့။ အဲ့မှာ ဂပြနျတှကေ နိုး နိုး…ဒီကားမစီး ဘူး ဒီကားမစီး ဘူးဆိုပွီး ငွငျးပါေ လရော။
ဟာ ဘာလို့လဲမေးလို ကျတော့ တခွားကားစီးလို့မ ရဘူးလား တဲ့။ ဒါနဲ့ပဲ ဧညျ့သ ညျဆိုတော့ တဈခွားကားပွေ ပးရတာပေါ့။ ပွီးတော့မှ ဘာလို့ ဟိုကား ဘာလို့ မစီးတာ လဲလို့ မေးကွညျ့ေ တာ့ “အဲ့မှာ ဘေးမှာစာေ ရးထားတယျ ဆူနာမီ အရေးေ ပျါအမှိုကျသယျ ယာဉျတဲ့၊ အာ့ ငါတို့ဆီမှာ အမှိုကျသီးသနျ့ သယျတဲ့ကား တဲ့”
ဒါနဲ့ပဲ ဟိုဖကျကားက ယာဉျေ မာငျးနဲ့ စပယျယာကို ဂပြနျကား ဂပြနျစာတ နျးကွီးနဲ့ ဂုဏျယူမနနေဲ့ အာ့စာတှေ ဖကျြထားလိုကျလို့ ခငျဗြားတို့ကားက ဂပြနျမှာအမှိုကျ ကားလုပျခဲ့ တာလို့ ပွောခဲ့လိုကျရပါေ တာ့တယျ။
တခြို့ကားေ တှမှာ ဂပြနျစာတှေ ကပျထားတာကို ဘာတှေေ ရးထားမှနျး နားမလညျတာကွောငျ့ ဒီအတိုငျးပဲ ဆကျကပျထား တဲ့သူတှေ ရှိတတျ ပါတယျ။ တဈခါက လညျး ဘျောဒါ တဈယောကျ DV အမှနျသှငျးတော့ ကားပျေါမယျ ကတျ ၂ ကတျပါလာ တယျ။ နောကျဖုံးက ကပျထားတဲ့ဂြ ပနျစာကို ဂပြနျစာတ တျသူကို ဘာသာပွနျခိုငျးတော့ “ဟြောငျ့ မငျးကားကွီး အမွနျရောငျးလို ကျတော့တဲ့” ကပျထားတဲ့စာက အရေးပျေါအေ လာငျးတငျယာဉျပါ တဲ့။
ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့ကားမှာ ဂပြနျစာတှကေ ပျထား တာပါလာရငျ Google Translate Application ကိုသုံးပွီး (သို့) ဂပြနျစာနား လညျတဲ့သူကို ဘာသွာ ပနျခိုငျးကွပါလို့ အကွံပွုရငျး…. Author – Soe Ye Lin
ဂျပန်ေ တွ ကျိုက်ထီးရိုး လိုက်ပို့ တော့ ကားလေးေ တွ အပေါ်တက်လို့မရဘူး လမ်းအြေ ခအနေနဲ့safety ကြောင့် ကားကြီးေ တွနဲ့ တောင်ပေါ်တက်ရ တာပေါ့။ အဲ့ဒါနဲ့ ကားလက်မှ တ်ဖြတ်ပြီး ဂျပန်စာတန်ြး ကီးနဲ့ကားပေါ်တက်မယ်ေ ပါ့။ အဲ့မှာ ဂျပန်တွေက နိုး နိုး…ဒီကားမစီး ဘူး ဒီကားမစီး ဘူးဆိုပြီး ငြင်းပါေ လရော။
ဟာ ဘာလို့လဲမေးလို က်တော့ တခြားကားစီးလို့မ ရဘူးလား တဲ့။ ဒါနဲ့ပဲ ဧည့်သ ည်ဆိုတော့ တစ်ခြားကားပြေ ပးရတာပေါ့။ ပြီးတော့မှ ဘာလို့ ဟိုကား ဘာလို့ မစီးတာ လဲလို့ မေးကြည့်ေ တာ့ “အဲ့မှာ ဘေးမှာစာေ ရးထားတယ် ဆူနာမီ အရေးေ ပ်ါအမှိုက်သယ် ယာဉ်တဲ့၊ အာ့ ငါတို့ဆီမှာ အမှိုက်သီးသန့် သယ်တဲ့ကား တဲ့”
ဒါနဲ့ပဲ ဟိုဖက်ကားက ယာဉ်ေ မာင်းနဲ့ စပယ်ယာကို ဂျပန်ကား ဂျပန်စာတ န်းကြီးနဲ့ ဂုဏ်ယူမနေနဲ့ အာ့စာတွေ ဖျက်ထားလိုက်လို့ ခင်ဗျားတို့ကားက ဂျပန်မှာအမှိုက် ကားလုပ်ခဲ့ တာလို့ ပြောခဲ့လိုက်ရပါေ တာ့တယ်။
တချို့ကားေ တွမှာ ဂျပန်စာတွေ ကပ်ထားတာကို ဘာတွေေ ရးထားမှန်း နားမလည်တာကြောင့် ဒီအတိုင်းပဲ ဆက်ကပ်ထား တဲ့သူတွေ ရှိတတ် ပါတယ်။ တစ်ခါက လည်း ဘော်ဒါ တစ်ယောက် DV အမှန်သွင်းတော့ ကားပေါ်မယ် ကတ် ၂ ကတ်ပါလာ တယ်။ နောက်ဖုံးက ကပ်ထားတဲ့ဂျ ပန်စာကို ဂျပန်စာတ တ်သူကို ဘာသာပြန်ခိုင်းတော့ “ဟျောင့် မင်းကားကြီး အမြန်ရောင်းလို က်တော့တဲ့” ကပ်ထားတဲ့စာက အရေးပေါ်အေ လာင်းတင်ယာဉ်ပါ တဲ့။
ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကားမှာ ဂျပန်စာတွေက ပ်ထား တာပါလာရင် Google Translate Application ကိုသုံးပြီး (သို့) ဂျပန်စာနား လည်တဲ့သူကို ဘာသြာ ပန်ခိုင်းကြပါလို့ အကြံပြုရင်း…. Author – Soe Ye Lin
Previous post ပိုလနျတပျမတျော မှာ ကိုယျပိုငျ နံပါတျ၊ ကိုယျပိုငျရာထူးနဲ့ တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့တဲ့ တိုကျပှဲဝငျ ဝကျဝံလေး အကွောငျး
Next post တိုကျလယောဉျ တှေ မှာ အဲယားကှနျး ပါလား မပါဘူးလား …….